आईफिक्सिटले एयर ट्यागको भित्री भाग देखाउँदछ म म्याकबाट हुँ
आईफिक्सिटले एयर ट्यागको भित्री भाग देखाउँदछ
आईफिक्सिट स्टाफले यो हेर्ने समय भएको छ नयाँ एयर ट्यागको भित्री भाग केहि ग्राहकहरुमा डभ्यामेन्ट पछि यो प्रयोगकर्ताको हातमा छ। अब हामी तिनीहरूलाई कम्तिमा एक महिना प्रतीक्षा गर्न को लागी तिनीहरूलाई मजा लिन सक्षम हुन सक्छ। यस्तो देखिन्छ कि यो एक उपकरण हो जुन पहिले, मानिसहरूलाई विश्वास दिलाएको छ र समायोजित मूल्यले यसको खरीददारहरू बन्द गरेको छैन। त्यसकारण आईफिक्सिट विशेषज्ञहरू हामी चाहन्छौं कि हामीले के खरीद गरेका छौं तिनीहरू हेर्न चाहन्छन्।
1 आईफिक्सिटले एयरट्यागहरू बजारमा अन्य मोडेलहरूसँग तुलना गर्दछ
2 एयरट्यागहरूको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा भनेको उनीहरूले स्पीकरलाई मिलाउने तरिका हो
आईफिक्सिटले एयरट्यागहरू बजारमा अन्य मोडेलहरूसँग तुलना गर्दछ
नयाँ एप्पल उपकरणहरूको भित्री दृश्य हेर्न सक्षम हुनु अघि जसको उपयोगिता हामीले हराउने वस्तुहरू पत्ता लगाउन सक्षम हुनु हो, यो राम्रो छ पहिले नै बजारमा तीसँग तुलना गर्न। यो गर्न, iFixit उनले एप्पललाई टाइल र सामसु ofको मोडेलसँग तुलना गरे। र हामी समानताहरू पाउँछौं तर केहि भिन्नताहरू जुन कि रिडन्डन्सीको लायक हुन्छन्, तिनीहरू एक र अर्को बीचमा भिन्नता राख्छन्।
आईफिक्सिटले एप्पलको एयरट्यागलाई टाईल मेट र सामसु g ग्यालेक्सी स्मार्टट्यागसँग तुलना गर्‍यो। आकारमा, स्पष्ट रूपमा एयरट्यागको सानो आकार छ। यसको मतलब यो हो कि ब्याट्री आफैंमा राख्नको लागि प्रयोग गरिएको आन्तरिक ठाउँ सानो छ र जे होस् उनीहरूले यसलाई उत्तम प्रयोगको साथ बचत गर्न व्यवस्थित गरेका छन्। डिजाईनमा एउटा उल्लेखनीय भिन्नता यो छ कि कुनै पनि भित्र रहेको कुञ्जी फोबमा यसलाई अंकित गर्न एयरट्यागमा कुनै प्वाल छैन। यसको मतलब अन्ततः एप्पलबाट वा तेस्रो पक्षबाट सहयोगी किन्नु भनेको उदाहरणका लागि कुञ्जीमा थप्नुहोस्, जुन मलाई लाग्छ यी उपकरणहरू मध्ये सबैभन्दा उपयोगी छ।
तीन उपकरणहरूको रेडियोग्राफले देखाउँदछ एप्पलले आन्तरिक ठाउँ खेर फाल्यो तपाइँको वस्तु ट्र्याकर को लागी। अर्कोतर्फ, टाइल म्याट र ग्यालक्सी स्मार्टट्यागले सबै उपलब्ध स्थानको फाइदा लिएको छैन र "आन्तरिक अन्तरिक्षमा खाली ठाउँहरू छोडेको छ"। यसको शीर्षमा, यी दुबै कुनै पनि होइन, र उनीहरूको ठूलो आकारको बाबजुद पनि, अल्ट्रा-ब्रॉडब्यान्ड टेक्नोलोजी समावेश गर्दछ जस्तै एयरट्यागहरू। यो ध्यान देने योग्य छ कि सामसु्गले ग्यालक्सी स्मार्टट्यागको एक अल्ट्रा-वाइडब्यान्ड संस्करण जारी गर्‍यो; जे होस्, iFixit तुलनाको लागि नमूना प्राप्त गर्न असमर्थ थियो।
टाइल म्याट, ग्यालक्सी स्मार्टट्याग र एयरट्यागले प्रतिस्थापन सिक्का-प्रकारको ब्याट्री सुविधा दिन्छ। एयरट्याग र ग्यालक्सी स्मार्टट्याग .2032Wh CR66 ब्याट्री, जबकि टाइल जोडीले साना .1632Wh CR39 ब्याट्री प्रयोग गर्दछ। सबै तीनमा, ब्याट्री प्रतिस्थापन तरीका समान छ र यो प्रतिस्थापनको लागि उपकरण खोल्न धेरै गाह्रो छैन।
सबै तीन उपकरणहरू केवल तपाइँको औंलाहरूको प्रयोगले खोल्दछ, कुनै अन्य उपकरणहरू आवश्यक पर्दैन! त्यो भनियो, एयरट्याग सबैभन्दा धेरै गाह्रो छ, विशेष गरी यदि तपाईं तेल वा भिजेको औंलाहरू छन्। कल्पना गर्नुहोस्, अदुवाको भाँडो मात्र दुई चिप्लो औं .्गहरूको साथ खोल्नुहोस्, र तपाईं यो बानी हुनुहुनेछ। अन्य मोडेलहरु मा औंला नखो संग टुक्रा अलग गर्न तत्वहरु समर्पित छ। केहि सरल र अधिक व्यावहारिक।
एयरट्यागहरूको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा भनेको उनीहरूले स्पीकरलाई मिलाउने तरिका हो
एयरट्यागसँग एउटा बिल्ट-इन स्पिकर छ जसले फाइन्ड माय अनुप्रयोगको माध्यमबाट जोडा बनाइएका आईफोनको माध्यमबाट आवाजहरू निकाल्दछ। एप्पलले ट्र्याकरमा स्पिकर फिट गर्नको लागि नयाँ तरीकाको बारे सोच्नु पर्‍यो किन यो कति सानो छ। कम्पनीले प्रयोग गर्ने निर्णय गर्यो स्पिकरहरूका लागि ड्राइभरको रूपमा उपकरणको सम्पूर्ण शरीर, कभरको तल स्पिकर चुम्बकको रूपमा सेवा गर्दै।
तपाईंले कभरको तल "बटन" याद गर्नुभयो? त्यो क्लिक गर्न मिल्ने बटन होईन, किनकि म्याट र स्मार्ट ट्यागले गरेको छ, बरु चुम्बक हामीले पहिले एक्स-रेमा देख्यौं। मलाई थाहा छ डोनट आकारको तर्क बोर्ड भित्र मात्र फेला पर्‍यो, एक लाउडस्पीकर गठन गर्न एक तांबेको कोयलमा नेस्ट गरिएको। त्यो हो, एयरट्यागको मुख्य भाग एक स्पिकर ड्राइभर हो। ऊर्जा कुण्डलमा पठाइन्छ, जसले यसलाई चुम्बकमा बोक्दछ, जसले प्लास्टिकको आवरणले ब्याट्रीलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ जसबाट आवाज हराउँछ जब यो हराउँछ जब आवाज हराउँछ।
iFixit बताउँछ कियो उपकरण मार्फत प्वाल पार्न सम्भव थियो यसको निर्मित कुञ्जी फोब प्वालको अभावको लागि बनाउने। त्यसो गर्नाले निश्चित नै एयरट्याग वारेन्टी शून्य हुनेछ, र यो सम्भव भएसम्म यो जोखिम हो। आईफिक्सिटले औंल्याएझैं "गलत ठाउँमा ड्रिलिंगले गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छ।"
यो पृथक नहुने गाइडहरूको पहिलो हो। हामी दोस्रो पर्खाइमा हेर्छौं जहाँ उनीहरूले भन्छन् कि तिनीहरू एयरट्याग सर्किट बोर्ड र अन्य गोप्य रहस्यहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी समावेश गर्दछन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » धेरै » आईफिक्सिटले एयर ट्यागको भित्री भाग देखाउँदछ
वारेन बफेटले स्टीव जॉब्सको सम्झनाका साथ एप्पलको टिम कुकको नेतृत्वको प्रशंसा गरे